3 * Haute Vosges gîte kunye nesauna - I-Airbnb
3 * Haute Vosges gîte kunye nesauna
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAlexandra
I-Gite kunye ne-sauna entliziyweni ye-Hautes Vosges yabantu aba-5, kufutshane ne-ski slopes kunye neendlela zokuhamba ngebhayisikili kunye neentaba. Imizuzu eli-10 ukusuka eGérardmer naseLa Bresse. Ukujongana nendalo kunye neninzi enkulu eya kuvuyisa abantwana!
Imizuzu eyi-10 ukusuka eGérardmer naseLa Bresse, i-gîte ehlaziywe ngokupheleleyo ekwazi ukuhlalisa abantu aba-5, equka amagumbi amabini okulala, eyokuqala iquka ibhedi ephindwe kabini kunye neyesibini ibhedi kunye nebhedi enye. Le yangasese lixhotyiswe uhambahambe amakhulu ishawa kunye itawuli kaloliwe eshushu, kumgangatho ophantsi igumbi lokuhlala enkulu ekhitshini zinakho (njengesicocisi, eziko, microwave ....), Igumbi eliphilayo sofas ezimbini, TV , Umdlali we-dvd ye-blu-ray, inkqubo ye-hi-fi kunye nendawo encinci yokuphumla ejongene nendalo kunye nemidlalo yebhodi kunye nokufunda. Uya kuba nomatshini wokuhlamba kunye nesomisi sempahla.
I-sauna ikwindawo yakho njengoko ufuna.
Iibhedi zenziwa ekufikeni kwakho, kuya kufuneka wonwabe !!
Ukhenketho oluvunyiweyo lweenkwenkwezi ezi-3.
Izixhobo zomntwana xa ziceliwe (simahla). Ukucocwa kokuphela kokuhlala (ngaphandle kwezitya kunye nemigqomo) kuyakhethwa nge-50 yee-euro.
I-3 km ukusuka kumbindi welali, kulula kakhulu ukufikelela kuyo, i-cottage ijongene nendalo. Ithafa kunye neefestile ezimbini zebhayi ezijonge ithafa elikhulu eliwela umlambo, elijongene nentaba kunye nepineyini.
Uninzi lokuhamba ukusuka kwi-gîte.
Siyazamkela iindwendwe zethu ngokwethu kwaye sisoloko sifumaneka ukuba kuyimfuneko.
Inombolo yomthetho: 391-13-001
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rochesson